Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo ka hadlay qorshaha ka dambeeya Shirka Jabuuti - Awdinle Online
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo ka hadlay qorshaha ka dambeeya Shirka Jabuuti
Dhinaca kale, waxaa madaxtooyada ka soo baxay qoraal uu Farmaajo ku saxiixan yahay, kaasoo Madaxweyne ku meel gaar ah u aqoonsanaya madaxweynaha Jubbaland mudane Axmad Maxamad Islaam (Axmad Madoobe).
Tani waxay daaha ka qaadday in madaxweyne Farmaajo uu yahay ninka sida tooska ah ugu jira dagaalka Jubbaland, isagoo xukuumadii iyo Baarlamaankiba waxba ka soo qaadin.
Labada sano ee uu qoraalkiisa ku sheegay ayuu ku doonayaa gorgortan Axmad Madoobe iyo Puntland lagu oggolaysiiyo muddo kordhinta labada sano ah ee Farmaajo.
Dhinaca kale, Farmaajo oo ka jawaabaya cadaadiska kaga yimid beesha caalamka, doonayana in uu maja xaabiyo dadaalka Aqalka Sare, ayaa ku baaqay shir ay madaxda Dowladda Federaalka ah iyo dawlad Goboleedyada isugu yimaadaan, kaasoo aan lahayn muddo cayiman.
Wuxuu doonayaa in shirka Dowladda Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada uu dhaco kulanka Guddiga Doorashooyinka ay Baarlamaanka ku hor imaanayaan kaddib.
Guddiga ayaa Baarlamaanka ka codsan doona muddo kordhin si ay doorasho qof iyo cod ah u qabtaan.
Previous articleGo’aankii Dowladda oo Jubbaland kasoo horjeesatay
Next articlePresident Muse Bihi rejects the Unity and integration of Somalia and Somaliland